လူးဝစ် Martinez | | မြို့ကြီးများ, လမ်းပြ
အ စွန့်ပစ်မြို့ကြီးများ ၎င်းတို့သည်နိယာမအားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောအားလပ်ရက်ခရီးစဉ်အများဆုံးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်အခြားသူများအားသူတို့၏နေထိုင်သူများကစွန့်ခွာခဲ့ကြပြီးမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှထိုနေရာသို့မပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ယနေ့တွင်၎င်း၏အဆောက်အအုံများနှင့်အဆောက်အအုံများသည်ပျက်စီးယိုယွင်းမှုတွင်ဆက်လက်ရှင်သန်နေပြီး၎င်းတို့ကိုတစ္ဆေသဏ္ဌာန်အရကြည့်ရှုနိုင်သည်။
una နျူကလီးယားကပ်ဘေး, Las စစ်ပွဲ၏နောက်ဆက်တွဲ သို့မဟုတ် သဘာဝသယံဇာတများကုန်ခန်းခြင်း ယင်းသည်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးမှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထိုနေရာများသည်လူသူမနေသည့်နေရာတွင်ကျန်ရစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းအချို့ဖြစ်သည်။ သင်၏အလည်အပတ်ခရီးသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကျော်ကြားဆုံးစွန့်ပစ်ထားသောမြို့ကြီးအချို့အကြောင်းကိုသင့်အားပြောပြပါမည်။
1.1 1.- ပရီယာယပ်၊ ချာနိုဘိုင်း၏သက်ရောက်မှုများ
1.2 Oradour-sur-Glane, စစ်၏အသံတိတ်သက်သေခံ 2.-
1.3 3.- Bodie, ကြွယ်ဝသောဖို့ရည်မှန်းချက်
1.4 စွန့်ပစ်ခံရသည့်မြို့များအကြားရှိဂလင်းဂျီမာ (Gunkanjima)
1.6 6.- Bhangarh တစ်ဂုရု၏ကျိန်စာ
1.7 Vesuvius အားဖြင့်ပျက်စီး 7.- Herculaneum
1.8 8.- Craco တစ် promontory ၏ထိပ်ပေါ်မှာတစ္ဆေမြို့
1.9 ၉။- စွန့်ပစ်ထားသည့်ကေးကေးမြို့တော်သည်ပြတိုက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်
1.10 10.- Belchite, Ebro ၏စစ်တိုက်၏သားကောင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ခရီးစဉ်ကိုစတင်ပါမည် ယူကရိန်း အဆုံးသတ်မှာ Espana။ လမ်းတစ်လျှောက်, ငါတို့သွားရောက်ပါလိမ့်မယ် ပြင်သစ်, ဂျပန် သို့မဟုတ်ရေခဲ နော်ဝေ။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ငါတို့ခရီးစတင်ကြကုန်အံ့။
1.- ပရီယာယပ်၊ ချာနိုဘိုင်း၏သက်ရောက်မှုများ
ဤယူကရိန်းမြို့သည်အလုပ်သမားများ၏အိမ်များကိုတည်ဆောက်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့သည် ချာနိုဘိုင်းနျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောမတော်တဆမှုကြောင့်ဝမ်းနည်းစွာကျော်ကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုကိုကြောက်သောကြောင့်လူနေထိုင်မှုမရှိသေးပါ။ သို့သော်သူတို့၏အိမ်များနှင့်အဆောက်အအုံများမှာမူနျူကလီးယားစွမ်းအင်သည်ဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားသတိရစေသည့်ပြိုကွဲမှုတစ်ခုပြနေဆဲဖြစ်သည်။
စွန့်ပစ်ထားသည့် Pripyat မြို့
Oradour-sur-Glane, စစ်၏အသံတိတ်သက်သေခံ 2.-
၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင်ဂျာမန်တပ်များသည်ဤပြင်သစ်မြို့တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ယောက်ျား၊ မိန်းမနှင့်ကလေး ၆၄၂ ဦး ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ စစ်အပြီးတွင်ပြင်သစ်တို့သည်ရှေးဟောင်းမြို့အနီးတွင်မြို့သစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ရိုင်းစိုင်းသောအယူအဆများအဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည့်အတိုင်းစပိန်နိုင်ငံတွင်လည်းအလားတူအရာတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် ပြည်တွင်းစစ်.
3.- Bodie, ကြွယ်ဝသောဖို့ရည်မှန်းချက်
တည်ရှိသည် Californiaဒီမြို့ဟာဆွဲဆောင်လာကြသူတွေကိုအမိုးအကာပေးဖို့တည်ဆောက်ခဲ့ကြသူတွေထဲကတစ်ခုပါ ရွှေအဖျား ထိုဒေသရှိ 20 ရာစုအကုန်တွင်လွှတ်ခဲ့သည် အချိန်တိုအတွင်းတွင်သူသည် ၂၀ မှ ၁၀,၀၀၀ အထိကြီးထွားလာပြီးဤအဖိုးတန်သတ္တုတွင်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာသန်းတစ်ဝက်နီးပါးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀ ရာစု၌၎င်းသည်ယိုယွင်းပျက်စီးသွားပြီး၎င်းကိုစွန့်ပစ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပင်လယ်ဟာပင်လယ်အလယ်မှာဘယ်သူမှမနေချင်တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ ထို့အပြင်ထိုဒေသရှိတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများမှာများသောအားဖြင့်၎င်းအားပျက်စီးစေခြင်းမှကာကွယ်ရန်နံရံများစည်းကြပ်ခြင်းဖြင့် ၀ န်းရံထားသည်။
သို့သော်၎င်းသည်ကြွယ်ဝမှုရှိသည်။ မီးသွေး။ သူ၏သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်အလုပ်သမားများနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးကျွန်းပေါ်တွင်မြို့တစ်မြို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အမြင့် ၄၀၀ ရာနှုန်းအမြင့်တစ်ရာ့ငါးဆယ်ခန့်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည် claustrophobic ဖြစ်သည်။ သတ္တုတွင်းကိုပိတ်လိုက်သောအခါ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်မြို့သည်လူသူကင်းမဲ့သောနေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်.
ယခင်မြို့ဟောင်းကဲ့သို့ပင်နော်ဝေနိုင်ငံ Pyramiden သည်ကျောက်မီးသွေးတွင်းလုပ်သားများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများနေထိုင်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၇ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်မြို့တော်သည်ဆိုဗီယက်များသို့ရောင်းချခဲ့ပြီးသူတို့၏စက်ရုံအလုပ်ရုံတွင်အလုပ်လုပ်ရန်သူတို့၏နိုင်ငံသားများကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသူတို့အသက်ရှင်ဖို့လာကြ၏ လူတထောင်လောက်ရှိတယ် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်သတ္တုတူးဖော်ရေးကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
6.- Bhangarh တစ်ဂုရု၏ကျိန်စာ
၁၆ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောဤမြို့သည် အိႏၵိယ ဒဏ္legာရီ Maharaja ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ခမ်းနားထည်ဝါသောအချိန်နေထိုင်ခဲ့တယ် Bahgwant Dasသူသည်လှပသောနန်းတော်တည်ဆောက်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒဏ္theာရီအရဒီအာဏာကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဂုရုတစ်ယောက်ကမြို့ကိုကျိန်ဆဲလိုက်တယ်။
ယုံကြည်ချက်အရအချို့သောမျိုး သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လူ ဦး ရေထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးအဘယျသို့သခြောသိရသညျကို ၁၇၂၀ ခုနှစျတှငျအောငျမွငျခဲ့သညျ၊
Vesuvius အားဖြင့်ပျက်စီး 7.- Herculaneum
တောင်ပိုင်းရှိစွန့်ပစ်ထားသော Herculaneum မြို့ italiaကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ဗီဆူး အေဒီ ၇၉ တွင်အသက်ရှင်ကျန်သူအနည်းငယ်ကိုသူစွန့်ခွာခဲ့သည်။ တကယ်တော့ပြည်သူပြည်သားအများစုဟာအဲဒီမှာသေဆုံးခဲ့ကြရတယ်။
ထို အချိန်မှစ၍ ၎င်းသည်ဘယ်သောအခါမျှလူ ဦး ရေမထူနိုင်ပါ။ ဒီဟာကလက်ရှိ visitors ည့်သည်တွေဘာတွေလဲဆိုတာကိုလုံးလုံးမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ် နေ့စဉ်ဘဝ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကလက်တင်မြို့တစ်မြို့မှဖြစ်သည်။
8.- Craco တစ် promontory ၏ထိပ်ပေါ်မှာတစ္ဆေမြို့
ကျနော်တို့ကိုလိုက်နာပါ italia အခြားစွန့်ပစ်ထားသောမြို့တစ်မြို့ကိုပြရန်၎င်း၏လူဆိတ်ညံနေသောအသွင်အပြင်အားဖြင့်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်သည့်ဟန်ချက်ညီစေသည့်ဟန်ဆောင်တွင်တည်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ထဲမှာ အလယ်ခေတ် ၎င်းသည်လူလေးထောင်နီးပါးနေထိုင်သောချမ်းသာကြွယ်ဝသောမြို့ဖြစ်ပြီးမြင့်မြတ်သောနန်းတော်များနှင့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုပင်ရှိသည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးနေထိုင်သူများမှာ ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင်၎င်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီးယခုစွန့်ပစ်ထားသည့်အဆောက်အအုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအထက်မှကြည့်။ မမြင်နိုင်သောအရာများဖြင့်စောင့်ကြည့်နေသည် နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏ aura.
အဖြစ်လူသိများ Livissiဤသရဲတစ္ဆေမြို့သည်အနောက်တောင်ဘက် Fethiye မှရှစ်ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိသည် ကြက်ဆင်။ ၎င်းသည်လူ ဦး ရေခြောက်သောင်းခန့်ရှိသော ၂၀ ရာစုအစတွင်သူ၏ခမ်းနားထည်ဝါသောကာလကိုနေထိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော်တူရကီနှင့်ဂရိတို့အကြားစစ်ဖြစ်ပြီးနောက် ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင်စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရသည်။ လောလောဆယ်တွင်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည် အပြင်ဘက်ပြတိုက်ရာနှင့်ချီသောဂရိပုံစံနေထိုင်ရာနေရာနှင့်အသင်းတော်များနှင့်အတူ။ အချို့ကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးခဲ့သည်။
10.- Belchite, Ebro ၏စစ်တိုက်၏သားကောင်
တည်နေရာ Zaragoza de Belchite သည်ပြည်တွင်းစစ်မတိုင်မီသာယာဝပြောသောမြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်စစ်ပွဲအတွင်း၎င်းသည်တူညီသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောတိုက်ပွဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အီဘိုရာ၏.
၎င်းပြီးနောက်လုံးဝပျက်စီးသွားပြီးမြို့အသစ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုမြို့ဟောင်းသည်စစ်ပွဲ၏ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းသက်သေခံချက်အဖြစ်ထားခဲ့၏။ စပိန်နိုင်ငံတွင်သင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောမြို့မဟုတ်ပါ သူတို့ကအရမ်းနာမည်ကြီးတယ် ဘရူနိုင်းမက်ဒရစ်နှင့် Corbera de EbroTarragona ၌တည်၏။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသိအများဆုံးစွန့်ပစ်ထားသောမြို့ကြီးများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့သည်။ သို့သော်များစွာသောအခြားသူများရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ခေါ်ဆိုမှု မြို့ ၁၇တရုတ်အစိုးရသည် Gobi သဲကန္တာရအလယ်တွင်အနုမြူဗုံးဖြင့်စမ်းသပ်မည့်အလုပ်သမားများအားအိမ်ဆောက်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အမည်မရှိခဲ့ပါ။ OR Saint elmo, မြောက်အမေရိကရွှေအလုအယက်၏နောက်ထပ်သားကောင်နှင့် Epecuénရှေးဟောင်းအာဂျင်တီးနားခရီးသွား village ည့်ရွာ။ ဤမျှလောက်များစွာသောသူတို့သည်သင်သိလိုလျှင်သင့်ဒေသတွင်း၌ရှာတွေ့နိုင်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » စွန့်ပစ်မြို့ကြီးများ